रुस विश्वकप : आयोजक रुस र साउदी अरबबीचको खेल सुरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रुस विश्वकप : आयोजक रुस र साउदी अरबबीचको खेल सुरु
एजेन्सी । विश्व फुटबलको महासंग्राम रुस विश्वकप २०१८ को उद्घाटन खेल सुरु भएको छ । आयोजक रुस र एसियाली मूलुक साउदी अरेबीया प्रतिस्पर्धामा यतिबेला उत्रेका छन् ।
रुसको लुजनिकी स्टेडियममा हजारौं दर्शकमाझ खेला जारी छ । खेलअघि उद्घाटन खेलमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले सबैलाई रुसमा स्वागत छ भनेका थिए ।
यस्तै फिफाका अध्यक्ष जियोन इन्फान्टिनाले रुस विश्वकमा सहभागी सबै टोलीलाई बधाइ दिएका थिए नेपाली दर्शकले यस विश्वकप नेपाल टेलिभिजन, एनटिभी प्लस, कान्तिपुर टेलिभिजन र एक्सन स्पोर्टस् च्यानलबाट हेर्न सक्छन् ।
आज विश्वकपमा पहिलो पटक भिडियो असिसटेन्ट रेफ्री भिएआरको प्रयोगपनि गरिएको छ ।
रुस आयोजक टोली भएका कारण उसले छनौट चरणका खेल नखेली विश्वकपमा स्थान बनाएको टोली हो ।
साउदी अरेबीया भने छनौट चरण पारगर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रेको टोली हो । रुस र साउदी अरेबीयाको इतिहास हेर्दा उनीहरुबीच अहिलेसम्म मात्र २ पटक भेट भएको छ । जसमा रुसले साउदीलाई एकपटक पराजित गरेको छ ।
अर्को एक खेलमा दुवैले बराबरी खेलेका थिए । आज दुवै टोली जितका लागि मैदान उत्रेका छन् । रुस, साउदी अरेबीया सँगै ग्रुप एमा इजिप्ट र उरुग्वेपनि समावेश छन् ।
प्रत्येक टोलीले एकले अर्कासँग एक–एक पटक प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । अंकका आधारमा टोलीका विजेता र उवविजेता नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् ।